New sụgharịrị na-egosi otú ụfọdụ kpọmkwem ebe nke Apple Campus 2 ga- Esi m mac
Ndị sụgharịrị ọhụụ na-egosi etu ụfọdụ mpaghara Apple Campus 2 ga-adị
Nyaahụ Tọzdee na ekele maka mbipụta sitere na Silicon Valley Business Journal, anyị enweela ike ịmegharị onwe anyị set nke sụgharịta ahụtụbeghị mbụ n'ime nnukwu ọrụ nke Apple Campus 2, na-egosipụta ụlọ mgbakwunye dị ka ebe ọbịa, ụlọ nri na ọtụtụ ndị ọzọ.
A na-eme ndokwa itinye Apple na nzukọ dị iche iche na ndị Cupertino City Council n'abalị a iji tụlee nyocha ụlọ nke enyemaka ma ọ bụ nkwado ga-ewu na Campus n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ ka a ga-ewu na Campus 2 na ọnwa ndị na-abịanụ. N’etiti okwu ahụ, a ga-enwe nnabata nnabata abụọ nwere ebe a na-ere nri n’èzí na ebe a na-elekọta ya. Ihe onyonyo ndị a anyị na-ewetara gị ka esere na akụkọ ntozu nke enwetara site na akwụkwọ ahụ edepụtara.
Dị ka akụkọ ahụ, owuwu ndị ahụ ga-abụ nnabata, dị ka nke dị na onyogho nke soro usoro ndị a, ga-adị na "ụzọ ndị isi na-agafe agafe na Apple Campus 2" ga-ejekwa "inye nkọwa maka ogige dum." Dị ka ụlọ ọrụ isi, nke a na-akpọ «spaceship», a ga-ewu ebe ndị a na-anabata ndị ọbịa n'ime asụsụ nhazi ntakịrị, nke pụtara na ngwa, ihe owuwu na nkọwapụta ihe owuwu ụlọ ndị ọzọ ga-ezo ma ọ bụ zoo ya.
A ga-enwe ma ọ dịkarịa ala ụlọ abụọ maka ile ọbịa, ya bụ, maka ndị ọrụ na ndị ọbịa nwere ike iri nri ma zuru ike dị n'ogige nke isi mgbanaka. Ọnọdụ ndị a enweghị ebe obibi, ọ ga-abụkwara ndị ahịa nri, otu ụlọ oriri na ọ cafụ cafụ dị n'akụkụ ụzọ kama ị nweghị oche. Agbanyeghị, a ga-eji osisi rụọ mgbidi dị n'èzí ịnọdụ ala n'èzí.
N'ikpeazụ, a ga-enwe mmezi ebe maka 536 square mita ihe dị ka iji chekwaa akụrụngwa akụrụngwa na ngwaọrụ ndị ọzọ dị mkpa iji kwado ogige ụlọ akwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Ndị sụgharịrị ọhụụ na-egosi etu ụfọdụ mpaghara Apple Campus 2 ga-adị
Etu ị ga-esi kesaa ihu igwe Mac anyị na netwọkụ mpaghara
Esi nnukwu họrọ foto na iOS